Imifino - inani lokudla okunomsoco
Qaphela umndeni omuhle wezinambuzane - ama-peas, ubhontshisi, i-lentils, i-peas eluhlaza efriziwe, ubhontshisi we-pod, konke okuwusizo empilweni yethu.
Imifino iqukethe amaprotheni amaningi kanye nama-amino acid abalulekile , umzimba wethu okwakudingeka ngempela ukwakha, ubuyisele futhi uvuselele amangqamuzana abo kanye nezicubu, futhi uveza ama-enzyme namahomoni. "Amaqhawe" ethu acatshangwa ukuthi ungumthombo "wegolide" we-carbohydrate - izinto ezisinika amandla. Ehloniphekile futhi efanelekayo isibonakaliso esiqinile sokuqukethwe kwe-fibre yokudla. Bona, sizokhumbuza, sithuthukise ukugaya, senze umsebenzi we-intestine senzeke kuzo zonke izigaba "zokucubungula" kokudla okunomsoco, ukusiza ukubuyisela ukwakheka kwe-microflora ewusizo, ukunakekelwa kwenhlalakahle ye-pancreas kanye ne-bubble cholic, ube nempahla yokunciphisa ukucindezela okujutshwe (kufaka phakathi nezidakamizwa ngesikhathi sokukhulelwa ), sungula umzimba we-cholesterol kanye nokunciphisa amazinga kashukela egazini.
Uhlu lwamavithamini namaminerali atholakele ekubunjweni kobhontshisi kuyamangalisa. Lapha sithola: i-potassium, enesakhiwo sokususa i-edema nokulawula isigqi senhliziyo; insimbi nethusi, okudingekayo nge-hematopoiesis; i-zinc, eyandisa ukwelashwa; i-boron - njenge-zinc, ivuselela ukuthuthukiswa kwamahomoni wesilisa nowesifazane, ikhathalela amandla amathambo amathambo, okubalulekile kubomama nabamnakekeli, ngoba umzimba wabo udla i-calcium eningi, okumele futhi igcinwe emathanjeni abo; i-vitamin B, enikeza umsebenzi wesimiso sezinzwa; i-vitamin E - ivikela umzimba wethu ekuxhumeni okuyingozi kanye nokwakhiwa kwamakhemikhali anonya, ivikela inhliziyo kanye nezifo ze-vascular; choline.
Ama-peas, ubhontshisi, i-lentils, ama-peas afriziwe afriziwe kanye nobhontshisi bezintambo angabiliswa, aphekwe futhi aphekwe.
Uma ufuna ubhontshisi ukupheka masinyane, cwilisa ngaphambi kokupheka: emanzini abandayo amahora angu-5-8, emanzini ashisayo (90 ° C) - amahora angu-2.5-4. Ungakhohlwa, bese ukhipha lokhu ketshezi.
Ukuze ulondoloze isakhiwo nokunambitha kwamabhontshisi aluhlaza afriziwe, kufanele kuthululwe ngaphandle kwephakeji ngqo epanini ngaphandle kokuphazamiseka.
Ama-lentile anezinsimbi eziningi namaphrotheni kunama-peas nobhontshisi . Ukwengeza, kulula ukugaya futhi kangcono ukungena, ngoba i-fibre yokudla kuyo kancane.
Ama-peas ahlaza kanye nobhontshisi obuluhlaza ahluke kwezinye ubhontshisi owomile ngoba bacebile ku-ascorbic acid. Ngaphezu kwalokho, aqukethe i-fiber encane yokudla kune "abalingani" babo, ngakho-ke ungacasuli i-membrane yamangqamuzana nesisu futhi ungabangeli ukuqhuma.
Izitshalo ezisele zinezinto zokwandisa ukwakhiwa kwamagesi emathunjini, ngakho-ke ubukele ubukhulu bezinxenye.
Kusuka emanzini, ungapheka izitsha ezihlukahlukene. Bayokwazi ukulawula ukugaya nokuthuthukisa ukujikeleza kwegazi emzimbeni wakho, ngakho kufanele udle lokhu kudla njalo ngangokunokwenzeka.
Ubhontshisi - imikhiqizo ewusizo kakhulu uma kuqhathaniswa nemifino. Ayikho imifino ithuthukisa ukugaya kwakho ngendlela yokuthuthukisa izitshalo.
Ukuze uzizwe unamandla futhi ugcwele amandla , umuntu kufanele adle ubhontshisi ngisho noma kungenjalo nsuku zonke, okungenani izikhathi ezine ngesonto. Kusukela emanzini, ungase futhi ulungise izimonyo ezihlukahlukene ezenziwe ekhaya: izihlahla, amapelisi namaski. Chop the peas in grinder ikhofi bese uxube ukhilimu omuncu noma ukhilimu, futhi ukuhlunga ubuso kulungele! Umasikhi wenziwa cishe kanye nokuhlunga, kuphela kuma-peas amasha. Ama-peas amasha asetshenziselwa ukwenza i-porridge, ehlanganiswa namafutha omnqumo noma amagilebhisi, bese usetshenziswe ebusweni ngobuningi obunzima futhi obuneminyaka engu-10-15. Emva kwalokhu inqubo isikhumba sakho sizoba sesisha, siphumelele futhi sithandeke ekuthinteni.
I-yoghurt eyenziwe, i-yogurt, i-cottage ushizi
Izitsha best of Ukraine cuisine
Ukudla ngesikhathi sokuqeqeshwa kwesisindo
Izinzuzo kanye nokulimala ushizi: ingabe kufanelekile ukuba udle?
Lokho ongakwenza futhi ongakwazi ukukudla ngaphambi kokulala
Isaladi lama-shrimp ne-squid, iresiphi yoNyaka Omusha ngesithombe
Ukuzivocavoca kwezandla ezinhle
Indlela yokuhlela idethi enhle yothando
Indlela yokutshela abazali ngokukhulelwa, iseluleko sezengqondo
Ukuqhuma kwamathambo nobhontshisi
Pie ngamakhowe, ukhilimu omuncu kanye noshizi
I-Millet iphalishi kuhhavini le-microwave
4 "imisho" engafanele ukukhuluma nengane
Izakhiwo eziwusizo ze-stevia
Umkakhe kaPaululnogo Agata Mutseniets abhalisile
I-spikes ku-pelvis encane
Ukuphila komuntu siqu, indoda kanye nezingane zomculi uPelagia: yini eqinisweni, futhi yiyiphi inkolelo-ze?
I-Feng Shui - i-talisman ne-amulets, incazelo yawo